Gabdhaha oo shaqa la’aantu ku yar tahay marka wiilasha la barbardhigo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Gabdhaha oo shaqa la’aantu ku yar tahay marka wiilasha la barbardhigo
La daabacay måndag 13 mars kl 10.38
Gabdhaha oo waxbarta in ka badan wiilasha
Shaqo l´aanta oo soo yaraatay. sawir: Henrik Montgomery/TT
Warbixintii ugu dambeeysey ee shaqa la’aanta dalkaan ayaa muujineysa in hoos u dhac ku yimid balse weli ragga dhallinyarada ah ayaa waxaa adag in ay shaqooyin helaan marka la barbardhigo gabdhaha dhallinyarada ah.
Annika Sunden oo ah madax waaxeed ka hawlgasha xafiiska shaqada dalkaan ayaa sheegtey:
-Shaqa la’aanta dhallinyaradu hoos ayey u dhaceysaa, laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha. Gabdhaha dhallinyarada ah ayaa shaqa la’aantu ku yar tahay marka la barbardhigo wiilasha dhiggooda ah.
Annika Sunden oo ah madax waaxeed ka hawlgasha xafiiska shaqada.
Dhallinyarada da’doodu u dhaxeyso 18 jir ilaa iyo 24 jir ayaa ayaa 8,6 boqolkiiba gabdhaha da’daas jiraa shaqa la’aan yihiin meesha boqolkiiba 13,6 ay shaqa la’aan yihiin wiilasha dhallinyarada ah ee da’daas u dhexeeya.
378 000 oo qof ayaa shaqa la’aan ahaa dhammaadkii bishii febraayo, taas oo ilaa 3 000 oo qof ka yar isla xilligaas sanadkii hore.
Qiyaastii dhammaan shaqooyinka suuqa shaqada ayaa waxay ku xiran yihiin in qofka shaqadaas soo dalbanayaa uu ugu yaraan leeyahay waxbarasho heer dugsi sare ah, gabdhaha dhallinyarada ah ayaa waxbarta in ka badan inta ay dhallinyarada ragga ahi ay waxbarato , taasina waa tan sababta u ah in gabdhuhu shaqooyin helaan in ka badan wiilasha dhallinyarada ah.
Badanaa dadka hadda shaqa la’aanta isaga diiwaan galiya xafiiska shaqada dalkaan ayaa u badan dhallinyaro rag ah oo dhawaanahaan sharciyada dalkaan heley.